Izindleko zokukhiqiza esikhathini esifushane, isisekelo sabo kanye nokubaluleka kwazo.
Izindleko, noma ezinye izindleko, yinto yebhajethi ukuthi zonke izinhlangano zebhizinisi zizama ukuzama ukunciphisa. Ishidi lebhalansi lesikhathi sokubika singaqukatha izihloko eziningi ezibiza kakhulu, into eyinhloko ukuthi ukubaluleka kwabo kuvamile futhi kukuvumela ukuthi uthole imali engenayo, futhi ngaleyo ndlela uthuthukise. Ubukhulu bezindleko ezenzelwe imisebenzi yokukhiqiza kuvame ukuhambisana nomqondo wezindleko zokukhiqiza. Kule ndaba, phakathi kwezikole ezehlukene zezomnotho kunezingxoxo ezivuthayo ezivuthayo mayelana nokuthi kufanelekile yini ukufaka izindleko zokuthengisa imikhiqizo kumanani ayo yonke intengo. Ngakolunye uhlangothi, le nto yezindleko inesixhumanisi esingenakuqhathaniswa nomkhiqizo uqobo, ngoba ngaphandle kwenqubomgomo yokumaketha efanelekile akunakwenzeka ukunikeza ivolumu yokuthengisa eyohlanganisa zonke izindleko. Kulesi simo kuyacaca ukuthi ibhizinisi lizobhujiswa.
Kusukela ngombono wochwepheshe ngabanye bomnotho, izindleko ezihambisana nokugqugquzelwa kwezimpahla emakethe kanye nokukhangisa kwazo kufinyelela inani labo eliphakeme ngesikhathi sokukhiqizwa nokusatshalaliswa kwemikhiqizo emisha, emva kwalokho ijika lezindleko ezinjalo eshadini liye lafika phansi. Kusukela kulokhu kulandela ukuthi umkhiqizi, okwandisa izinga lokukhiqiza kanye nokuthengisa, ngokuhamba kwesikhathi kunciphisa lezi zindleko kanye nesabelo sabo emanani entengo yangempela (ngezindleko zangempela ukuqonda zonke izindleko ezihlobene nokukhiqizwa nokudayiswa kwemikhiqizo). Ngakho-ke, kulesi simo, i-curve isivuno sinomvini obuka njalo.
Kulokhu, kunombono wokuthi kufanelekile ukuhlukanisa izindleko zokukhiqiza izindleko zokukhiqiza nezindleko zokuqalisa. Izindleko zokukhiqiza esikhathini esifushane zingabonisa indlela inzuzo ngayo leyo nkampani esikhathini eside. Izindleko ezinjalo zibandakanya izisebenzi kanye nezinsiza ezibonakalayo ngeyunithi yokukhiqiza, okuyinto, njengomthetho, okufanele ihlale ingashintshi. Kodwa leyo nkambo yezenzakalo iyingqayizivele kuphela emnothweni ozinzile futhi ozinzile, okwenziwe namuhla njenge-idyll engokoqobo. Izindleko zokukhiqizwa nokudayiswa kwemikhiqizo zihambisana nezinguquko ezivela kokubili izinto zangaphakathi nezangaphakathi, njengokufuna kwesimo sonyaka, izinguquko ezimweni zemakethe, izinto ezintsha ekukhiqizeni, nabanye abaningi, kuhlanganise nezimo ezihlukahlukene zamandla amakhulu. Izindleko zokukhiqiza esikhathini esifushane zenziwe ngcono kakhulu njalo, ngakho kulula kakhulu ukuba abakhiqizi abaningi bakwazi ukubeka umkhawulo wokuzuza ngenhlobo ngayinye yomkhiqizo.
Esikhathini sesayensi yezomnotho yanamuhla, kubhekwa njengengqungquthela ukubeka izindleko zezindleko zokuguquguquka nezokuthengiselana. Uma uhlobo lokuqala lwezindleko luhlotshaniswa nenqubo yokucubungula izinto zokwakha kumkhiqizo wokugcina wokudayiswa, okwesibili kuhlobene nezindleko ezinjalo njengokuvikela isikhundla sokuhweba, brand, brand. Lezi zindleko azihlobene nokudala inani lemikhiqizo eqedile. Izindleko zokukhiqiza esikhathini esifushane zihlobene kakhulu nezindleko zokuguqulwa.
Ngokuvamile, izinguquko ezingalingani ezindleko eziphelele ziholele ekutheni ukwanda kwemikhiqizo yokukhiqiza, izindleko maqondana neyunithi yokuguquguquka kokukhiqizwa. Izindleko ezinjalo nazo zibizwa ngokuthi izilinganiso. Izindleko zokukhiqiza ezilinganiselwe zibalwa njengezilinganiso zezindleko ezinkulu kanye nenani lemikhiqizo ekhishwe. Okokuqala, lolu hlobo lwezindleko lunenani elikhulu, kodwa ekukhuleni kokukhipha, kukhona ukuthambekela kokunciphisa. Ukukhiqizwa okuncane, kubaluleke kakhulu ekunciphiseni izindleko zokukhiqiza esikhathini esifushane, ngoba lokhu kuzovumela ukulungisa izindleko ezihleliwe ezingeni elithile futhi hhayi ukwehlisa umkhawulo wokuzuza.
Izingxenye eziyinhloko zezindiza. Ukuhlelwa kwezindiza
I-pre-eutectoid steel: isakhiwo, izakhiwo, ukukhiqizwa nesicelo